MEELAHA "METRONIDAZOLE" EE DIGAAGGA: TILMAAMAHA, QIYAASTA - BEERAHA DIGAAGA
Fikradda "digaagga xilliga dayrta waa la tixgeliyaa" ma ahayn falsafo. Nestlings ee digaagga iyo shimbiraha kale ee beeraha ayaa aad uga badan dadka qaangaarka ah, waxay ku xiran yihiin cuduro kala duwan, maxaa yeelay difaaca jirkoodu wali wuu daciif yahay si uu u adkeysto khataraha dibadda. Habka ugu fiican uguna kalsoon ee looga hortago bakteeriyada, sida aad ogtahay, waa antibiotics. Mid ka mid ah daawooyinkaan, kuwaas oo inta badan loo isticmaalo daaweynta digaagga, waa Metronidazole. Tixgeli sifooyinka isticmaalka ee maqaalka.
"Metronidazole" ma aha daroogo leh diirad adag. Laga soo bilaabo 1960, waxqabadyada lidka bakteeriga iyo antiparasitka waxaa lagu guuleystay in lagu daaweeyo dadka iyo xayawaanka (ma ahan oo kaliya shimbiraha), sidaa daraadeed daawada ayaa loo heli karaa noocyo kala duwan, gaar ahaan, qaabka:
kareemka isticmaalka dibadda;
Daawooyinka caafimaadka xoolaha, kiniiniyada ama granules ayaa inta badan loo isticmaalaa, xitaa inta badan xalalka cirbadaha.
Meelo "Metronidazole" waxay leeyihiin qaab ah silsilad isku mid ah oo midab cad ama huruud ah oo leh jajabyo jilicsan oo u dhexeeya dhinaca iyo saldhigga (oo loo yaqaan "chamfer") iyo hal koodh, oo u oggolaanaya in kiniinka loo qaybiyo nus. Miisaanka kiniinka iyo walaxda walaxda firfircoon ee ku jirta waxaa laga yaabaa inay ka duwan tahay, kuwaas oo:
0.25 g, oo leh 0.0625 g, ama 25% antibiotic;
0.5 g, oo leh 0.125 g, ama 25% antibiyootiko;
0.5 g, oo ka kooban 0.25 g, ama 50% antibiotic;
1 g oo ku jira 0.25 g, ama 25% antibiyootigga.
Marka lagu daro kiniinada "Metronidazole" waxaa ku jira daawo-cunto-kariye, istaatiitada baradhada, octadecanoic acid iyo talkohlorit.
Daawada ayaa iska leh daawooyinka leh saameynta antibakteriyaanka iyo antiparasitic, waxtar leh oo ka soo horjeeda maadado badan iyo dulinada kale. Gaar ahaan, dareenka antibiyootigga waxaa lagu muujiyey:
Ma taqaanaa? Balantidia (ereyga "balantidium" macneheedu waa "boorso") waa halbeegga ugu weyn ee unugyada halista ah ee bini-aadanka, oo saameynaya unugyada xiidmaha iyo waa wakiilka keena dysentery. iyo inta badan infekshanku wuxuu ka yimaadaa taabashada doofaarka, inkasta oo uu cudurku mararka qaarkood laga helo eeyaha.
Microbes oo leh nidaamyada enzymes oo soo celin kara kooxda nitro iyo dardar-gelinta geeddi-socodka is-dhexgalka ee fedoroksinka borotiinka leh xeryahooda nitrogenous waxay ku dhacaan goobta falalka daroogada. Daawada antibiyootigga waxay xakameysaa sameynta unugyada xasaasiga ah ee DNA iyagoo hoos u dhigaya kooxda nitro (NO2), kuwaas oo alaabadooda ay burburiyaan DNA-da shimbiraha, ka hortagga dib u soo noqoshada iyo sameynta. Farsamooyinka noocan oo kale ah waxay ka dhigaysaa daawada waxtarka leh ee la dagaallanka jeermiska jirka ee ku noolaan kara oo kobcin kara maqnaanshaha hawada atmospheric (noocyada bakteeriyada ee anaerobic), laakiin daawadu waa mid aan awood u lahayn aerobes iyo fungi. Qeybaha wanaagsan ee daroogada waa in loo tixgeliyaa waxtarka sare ee isticmaalka afka. Walaxda firfircoon ee habka dheef-shiidka ayaa si dhakhso ah ugu soo baxa dhiigga waxayna ku faaftaa dhammaan xubnaha iyo unugyada, oo ku urura beerka.
Mid ka mid ah dhibaatooyinka caadiga ah waa dulin-diga. Sidaa darteed, milkiilayaasha digaagga waa in ay ogaadaan sida loo takhaluso Gooryaanka digaagga, peroedov, injirta iyo shilinta.
Kala saaridda daroogadu waxay ku dhacdaa kaadida iyo saxarada, iyaga oo ku rinjirta midab casaan-casaan leh. Daawada si buuxda ayaa looga saaraa 48 saacadood ka dib qiyaasta ugu dambeysa.
Waa maxay cudurada loo isticmaalo?
"Metronidazole" waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo noocyada kala duwan ee bakteeriyada iyo cudurrada fayrasta, laakiin digaagga waxaa jira saddex tilmaam oo keliya isticmaalkaan:
Trichomoniasis - Nabaro diphtheritic iyo ulcerative lesions ee mareenka sare ee dheef-shiid kiimikaad iyo xubnaha kale ee ay keento protozoa of genus Trichomonas.
Coccidiosis - Cudurka khatarta ah, gaar ahaan inta badan saameynaya da 'yarta, pathogen - kooxda Coccidia ee aan la wadaagin.
Histomoniasis (oo sidoo kale loo yaqaanno enterohepatitis, ama tifiohepatitis, oo loo yaqaan 'madaxa madaxa madow') waa cudur la isqaadsiiyo, sidoo kale gaar ahaan khatarta digaagga, oo ay sababaan protozoans ka timaada qoyska Histomonas mellagridis.
Maadaama daroogada loo isticmaalo in lagu daweeyo noocyada kala duwan ee xayawaanka ee cudurada kala duwan, waxaa suurtagal ah in ay si faahfaahsan uga hadlaan qiyaasta kaliya ee la xiriirta kiis gaar ah.
Waa muhiim! Qiyaasta daawada ee daroogada, qiyaasta iyo muddada daaweynta waxay ku xiran tahay ujeeddada daaweynta (daaweynta ama daaweynta), nooca cudurka, nooca xoolaha, iyo da'diisa. Sida dawooyinka antibiyootigyada kale, adeecida adag ee sharciyadan marka loo eego "Metronidazole" waa khasab.
Hase yeeshee, guud ahaan, daawada waxaa badanaa la siiyaa qiyaas ahaan 20 mg oo ka mid ah walxaha firfircoon kiilo kasta oo xayawaanka ah ee xayawaanka maalintii, iyada oo maamulka afka laga qaato 2 jeer maalintii, 10 mg.
Nooc kasta oo digaag ah wuxuu leeyahay waxyaallaha gaarka ah marka la isticmaalayo Metronidazole.
Digaagga Broiler waxay si gaar ah ugu nugul yihiin duleedyada sida Coccidia iyo Histomonas mellagridis. Protozoa waxay ku dhufan kartaa chicks oo macnaheedu yahay maalmaha ugu horreeya ee noloshooda, sidaas darteed haddii aadan qaadin tallaabooyinka wakhtiga iyo xaaladaha degdegga ah, waxaad lumin kartaa dhamaan xoolaha yar yar ee dhiman doona iyaga oo aan awoodin inay miisaanka ku habboon qaataan. "Metronidazole" wuxuu kuu ogolaanayaa inaad xalliso dhibaatadan marxalad hore, xitaa ka hor intaan cudurka la dareemin. Sababtan darteed, inkastoo xaqiiqda ah, inkasta oo si fiican loo og yahay, qaadashada antibiyootigga ujeeda ujeedooyinka kahortagu waa ficil xun, waxay wali ku daalaan beerashada digaaga, siinaya digaagga daroogada afar jeer, 20-25 mg halkii 1 kg ee miisaanka nool ee maalmaha ugu horreeya nolosha iyo ka dibna labadii toddobaadba mar ilaa shimbirku gaadho da'da lix bilood.
Waa muhiim! Daroogadu waa liidataa biyo, sidaa daraadeed waxaad u baahan tahay inaad ku darto cuntada (taas, dabcan, ma ahan mid ku habboon, sababtoo ah shimbirta jirran badiyaa waxay diideysaa inay wax cunaan, laakiin mar walba waxay la kulmaan haraad). Kiniinku wuxuu kudhow yahay budada oo si fiican isku qasan cuntada.
Si kastaba ha noqotee, haddii chicks ay leeyihiin calaamadaha ugu horreeya ee coccidiosis, histomoniasis ama trichomoniasis, habka daweyntu waa inuu u ekaado mid kala duwan. Xaaladdan oo kale, daroogada ayaa lagu qoraa qiyaasta maalinlaha ah, laakiin waxaa la bixiyaa 2-5 maalmood, ka dib marka koorsada lagu celiyo 8 maalmood kadib.
Calaamadaha cudurada ka dhanka ah Metronidazole waxay wax ku ool yihiin shubanka dhiigga, dhaqdhaqaaqa hoos u dhaca, cunto xumo, xajmiga, ku garaaca tuulooyinka, haraad sii badan, curyaannimo.
Sida antibiyootiko kasta, Metronidazole waa in si joogto ah loo qaataa, ka ilaalinta jebinta wakhtiga gelinta qiyaasta soo socota, sababtoo ah ma aha oo kaliya yareyn kara saameynta daaweynta, laakiin sidoo kale waxay horseedi kartaa samaynta daroogooyinka u adkaysta daroogada. Haddii soo dhaweynta lacagtan la siidaayo, waxaa lagama maarmaan ah in dib loo bilaabo daaweynta sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah iyada oo la raacayo qorshe horay loo sii qorsheeyey.
Waxaan kugula talineynaa inaad wax ka baratid cudurrada faafa ee infekshanka iyo kuwa aan faafa ahayn ee digaagga broiler.
Wixii poults ee cudurrada kor ku xusan, sifuhu ugu badan yahay histology, taas oo saameeya beerka ee shimbiraha yar yar iyo inta badan keena dhimasho. Caadi ahaan, calaamadaha ugu horreeya ee jirrada (shubanka jaalaha ah ee xumbada, xayawaanka cuntada iyo dhaqdhaqaaqa, baaluqa, maqaarka buluugka ah ee madaxiisa) ayaa ku dhaca xayawaanka yaryar 2 toddobaad.
Ma taqaanaa? Caloosha hawada ee Turkigu waxay awood u leedahay inay ku dhaliso muraayadda, laakiin ka soo horjeeda dul-dhaqanka ugu fudud, shimbirkani waa mid aan awood lahayn sida kuwa kale.
Sida kiisaska broilers, turkiga waxaa lagu daaweyn karaa caawinta Metronidazole, iyo daroogada loo isticmaali karo ujeedooyinka prophylactic iyada oo aan sugin dhibaatada in ay muujiyaan laftiisa.
Daawooyinka daweynta teraabiyada - 30 mg miisaanka jirka oo kakooban, waxay u qaybsan yihiin saddex qaadasho maalin kasta ah (10 mg), muddada daaweynta - 10 maalmood. Mararka qaarkood waxay ka hadlaan habab kale oo lagu ogaanayo qiyaasta: dawada waxaa la siiyaa hal mar maalintii iyagoo ku daraya 0.75 g of Metronidazole (3 kiniin ama in ka badan, iyada oo ku xidhan maaddada daroogada hal kiniin) 1 kg oo cunto ah. Koorsada ogolaanshaha - isla 10 maalmood gudahood.
Isticmaalka daroogada ee ka hortagga ah waxaa ku jira qiyaasta maalin kasta ee 20 mg oo ah walax kasta 1 kg ee miisaanka jirka oo leh laba maalmood oo la qaato (ilo yar oo ku saabsan kooras dheer - 3-5 maalmood). Waxaa sidoo kale loo ogol yahay in loo isticmaalo for poults nidaam ka hortag isku mid ah sida digaagga broiler.
Baro sida loo daaweeyo shubanka poults turkey.
Da 'yarta baca iyo ducks waxay sidoo kale u nugul yihiin saddexda cudur ee kor ku xusan, gaar ahaan gistomonozu iyo trichomoniasis. Calaamadaha horey loo soo sheegay, oo muujinaya jiritaanka cudurkan, noocyada shimbiraha, waxaa habboon in lagu daro heerkulka jidhka, neefta oo adkaata, goyso oo kordhay, dheecaan ka soo baxa sanka iyo indhaha.
Waa muhiim! Ku guuldareysiga qaadashada tallaabooyinka deg-degga ah marka calaamadahaasi ay muuqdaan laba toddobaad gudahood natiijada dhimashada 90% ee dhalinyarada.
Daaweyntu waxay ka kooban tahay qaadashada daawada qiyaas ahaan 25-50 mg halkii rodol ee miisaanka jirka maalintii, iyadoo ku xiran darnaanta xaaladda. Koorasku sidoo kale wuu ka duwanaan karaa: mararka qaarkood 2-5 maalmood ayaa ku filan, xaaladaha kale, daaweyntu waxay socotaa ilaa 10 maalmood.
Soo-dhoweynta ka-hortagga waxaa lagu sameeyaa iyadoo loo eegayo nidaam isku mid ah sida digaagga broiler.
Waxaa habboon in la ogaado in waxtarka sareeya iyo qiimaha la awoodi karo ay go'aaminayaan isticmaalka Metronidazole si loogu daaweeyo maaha oo kaliya noocyada digaagga la xusay, laakiin sidoo kale shimbiraha kale - xamaamyada, boodhka, shimbiraha guinea, iwm.
Diyaargarowga guud ahaan waa mid si fudud u dulqaadan kara digaagga - daawada ma laha wax iska caabin toos ah oo loogu talagalay isticmaalka daawada xoolaha. Si kastaba ha ahaatee, waxaa habboon in la ogaado isticmaalka wakiilada xoogan ee antiparasitiga, oo ay ku jiraan Metronidazole, iyada oo aan si toos ah u qorin dhakhtarka (xitaa haddii aan ka hadleyno ka hortagga cudurada dhimashada ee digaagga dhalinyarada), si adag u hadla, waa ka horjeeda.
Waa muhiim! In kasta oo xaqiiqda ah in Metronidazole laga tirtiro jirka 2 maalmood kadib, shimbiraha qaadashada daawada ayaa loo oggol yahay in la gowraco mudo ka badan 5 maalmood kadib markii la soo qaatey. Haddii qof la dilay horraan muddadan, hilibkiisa waxaa loo isticmaali karaa cunnooyin xayawaan haleel ah ama u shaqeynaya hilibka iyo lafaha cuntada.
Waxa kale oo muhiim ah in la ogaado in daawadan antibiyootigga aan loo isticmaali karin daroogooyinka kale, gaar ahaan, kooxda nitroimidazole oo ay ka mid tahay, iyo sidoo kale quinoxaline derivatives iyo nitrofurans.
Dhibaatooyinka kale ee ka yimaadda isticmaalka "Metronidazole" ayaa dhif ah marar dhif ah, xitaa haddii qiyaasta lagu taliyey in ka badan tahay. Waxaa sidoo kale jira wax falcelin xun ah bilawga isticmaalka daroogada, iyo sidoo kale ka dib markii la joojiyo.
Waxa ka mid ah dhibaatooyinka suurtogalka ah ee loo yaqaan 'individual tolerance' (xasaasiyad xasaasiyadeed oo leh jaantusyo kala duwan), oo mararka qaar u muuqda qaas ahaan xasaasiyad. Laakiin marka la eego isticmaalka aan xakamayn iyo muddada dheer ee daroogada, horumarinta xiiqda yaryar ee maskaxda ayaa suurogal ah - cudur fungal ah oo lagu gartaa jiritaanka maskaxda afka, goystaha iyo hunguriga.
VIDEO: Waxaanu ula dhaqannay COCKDIOSIS MASRINTA METRONIDAZOL
Ka hortagga ugu fiican ee trichomoniasis, histomoniasis iyo coccidiosis ma aha maamulka antibiyootikada, laakiin ilaalinta shuruudaha nadaafadda iyo nadaafadda iyo habka quudinta shimbiraha.
Ma taqaanaa? Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ee sannadka 2016 wuxuu aqoonsaday in isticmaalka aan la xakameyn ee antibiyootikada ay tahay midda xoolaha ee laga yaabo inay tahay sababta ugu weyn ee soo baxday "superbugs" u adkaysata daroogooyinkaas iyo horayba awood u leh inay hal qof ku dhintaan sadexda ilbiriqsi kasta.
Marka lagu daro nadiifinta iyo qallajinta guriga, si joogto ah u nadiifinta guriga, ka saarista haraaga cuntada aan la cunin, ka reebista xayndaabyada iyo cudurada kale ee infekshanka dhismaha, xakamaynta isbeddelka iyo isbedelka heerkulka deg dega ah, si loo ilaaliyo beeraleyda caafimaadka qaba iyo kuwa hodanka ah waa inay raacaan sharciyadan fudud:
Ka ilaali xayawaanka yaryar gaar ahaan dadka waaweyn.
Samee karantiil bille ah oo loogu talagalay gu'ga cusub ee la soo iibsaday ka hor intaadan gelin qol caadi ah oo leh shimbiraha kale.
Isla markiiba diidmada chicks oo leh calaamadaha ugu horreeya ee cudurka.
Ha u dhiibin dawooyinkooda daawada lidka ku ah difaaca jirka "haddiiba ay dhacdo" ama marka la aqoonsanayo cudur aan la garaneynin iyada oo aan la helin ogeysiis iyo daaweyn dhakhtar soo qoray.
Ha ka badin tirada ugu badan ee shaqsiyaadka ah halkii mitir oo mitir ah (nooc kasta oo shimbiraha ah iyo mid kasta oo da'doodu ka duwan tahay tan caadiga ah).
Haddii ay suurtagal tahay, xakamee xidhiidhka digaagga ee shimbiraha kale, gaar ahaan, xamaamyada, taas oo ku jirta aqlabiyadda ugu badani ay yihiin kuwa sidayaasha ah ee trichomoniasis.
Waa faa'iido leh in la ogaado qiyaasta Metronidazole loogu baahan yahay digaagga qaangaarka ah.
Metronidazole waa daawo la xaqiijiyay oo wax ku ool ah oo lagu daaweynayo saddexda cudur ee ugu khatarta badan, oo badiyaa saameynaya digaagga. Si kastaba ha ahaatee, si ay uga hortagaan bakteeriyada qaarkood iyo dulinada si ay u sii wataan intii suurtagal ah, waa inaad isku daydaa inaad daawada u isticmaasho si adag sida uu dhakhtarku u qoro, qaadashada dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si looga hortago dhacdada cudurka, iyo gaar ahaan horumarkeeda iyo ku-beddelashada daba-galka ama antibiyootikada u adkaysata.